Akụkọ - AKWARIKWỌ dịgasị iche iche nke ngwaahịa ugbo, dị ka ndị na-azụ ahịa na-atụ aro, ugbu a dị iche iche na AGR FARM STOCKS
IHE dịgasị iche iche nke ngwaahịa ndị ọrụ ugbo, dị ka ndị na-azụ ahịa na-atụ aro, ugbu a ka a na-enweta naanị na AGR FARM STOCKS
Ogige Ugbo AGR, nke ama ama site na ndụmọdụ sitere n'aka ndị ahịa mpaghara, na-eto galik na ala ruo ọtụtụ afọ. Ahịa owuwe ihe ubi na-emepụta ọtụtụ galik etinye ngwaahịa sitere na galik ọhụrụ na ntụ ntụ.
AGR Ọkachamara Garlic, Manager Wendy Chen, nwere obi ụtọ na Ugbo Gallic ekwenyela ịde ngwaahịa ha. Wendy kwuru, “Ngwaahịa AGR Garlic Farm pụrụ iche na mpaghara ugwu China. Ọ dịghị onye ọzọ na-enye ụdị ngwaahịa a. Tupu anyị enwee ike ịkpọsa mbubata ngwaahịa na ahịa mpaghara, anyị fọrọ nke nta ka erere site na ihe niile anyị nwere na ngwaahịa. Nzaghachi ngwaahịa ndị ndị ahịa anyị nwere abụrụla ihe ịtụnanya. Enwere m ike ịkwado galik ọhụrụ ahụ. ”
AGR Garlic Farm ngwaahịa ndị a kwakọbara gụnyere bulbs galik ọhụrụ, ụdị dịgasị iche iche nke galik, galik ntụ, galik galik, na mmanụ galik.
Crisp Xu, Director na ngalaba-nchoputa nke AGR Garlic Farm, kwuru, sị, “Mgbe ndị ọrụ ugbo obodo ọzọ ndị ọzọ bịakwutere anyị ka anyị hụ ma ha nwere ike ibupụ ngwaahịa ha, anyị nwere obi ụtọ na anyị nwere ike inye aka.
“Anyị enweghị ọtụtụ galik nke ngwaahịa anyị na ngwaahịa ma nwee obi ụtọ ịnụ na ndị ahịa si mba ofesi na-anụ ụtọ ụdị dị. Anyị bụ ụyọkọ acres nke ala dị iche iche na-ebupụ ahịa na-echekwa aha ọma anyị, na-arụ ọrụ na ime obodo dabara n'ụzọ zuru oke na usoro azụmahịa anyị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere AGR Garlic Farm na ọtụtụ ngwaahịa ya biko gaa na weebụsaịtị: www.primeagr.com. Ngwaahịa Garlic Farm dị naanị na ngwaahịa dị njikere ka e ree ma zigara gị ụzọ anyị na ndị otu ahịa dị mma n'oge a.
Na obi nke AGR Garlic bu nkwa nke ibi ndu ndu. AGR Garlic Farm nwere onwe ya na ezigbo 'ubi na efere' na-arụ ọrụ na-etinye ụkpụrụ kachasị elu nke nkwado. N'iji usoro ọrụ ugbo kachasị adigide AGR na-etu ọnụ na ịnụ ụtọ mkpụrụ osisi apụl ọhụrụ sitere na obodo Asia. Ulo oru ahihia ahihia ruru ugbo abuo wee toro ihe ruru puku acres. A na-azụlite ginger Organic, apụl, eyịm, na galik mgbe oge ha ruru. AGR Farm na-enweta ngwaahịa ndị na-agbanwe agbanwe n'ime obodo si na ndị na-ebubata ya na mbubata na mba ọzọ.
A na-enweta ọtụtụ ngwaahịa AGR Garlic Farm na-ese onyinyo www.primeagr.com.